🥇 ▷ Realme: Tartankii dhabta ahaa ee Redmi iyo Xiaomi ✅
Realme: Tartankii dhabta ahaa ee Redmi iyo Xiaomi
Realme X oo buluug ah
Qaar badan ayaa laga yaabaa inay yaqaanaan sumadan, laakiin kuwa kale ma oga. Realme waa sumad hoosaad ku leh Oppo oo wajaheysa Redmi / Xiaomi, Meizu iyo Honor.
Runtii xishood ayaa ku bilaabmay
Shirkadda Aasiya oo xishood badan ku bilaabatay socdaalkii ay ku maraysay suuqa Aasiya, ayaa moodalkeedii ugu horreeyay soo bandhigtay muuqaalo aad u xiiso badan oo qiimaha ah, in kasta oo ay la tartamayaan inay garaacaan. Siyaabaha qaarkood ayaan uga adkaaday.
Shirkada Realme (oo ay maalgaliso Oppo) waxay ku guuleysatay inay raadiso mabda ‘ay ku xayeysiiso badeecadeeda, marwalbana ku bixiso Aasiya iyada oo loo sii iibinayo. toosh.
Shirkaddu waxay bilaabeen inay koraan
Mar alla markii guusha ay gaadho iyaga, Realme waxaay ku guuleysatay in ay siyaabo ku ballaariso aad u xiiso badan ku gaadho wadamo sida Spain oo leh moodooyin sida Realme 3 Pro oo ah qiimo aad u hooseeya oo aad ugu dhawaa waxa ay bixiso Xiaomi.
Iyada oo leh naqshado qurux badan oo cajiib ah, fiican qalabka iyo a software maalin, Realme waxay ku guuleysatay inay fuusho gudaha soosaarayaasha Aasiya waqti aad u yar.
Dhegta qoyan ee Redmi
Shirkadaha waa shirkadahaas oo macaash raadso.
Markii la sheegay in Redmi iyo Xiaomi soo bandhigi doonaan garoonkeeda ugu horreeya oo leh 64 kamarado MP ah Shirkadda Oppo ayaa nooga digtay inay bilaabi doonaan Terminaar ay wataan kamarad 64 MP ah.
Waxaan ka wada hadalnay xarigaan, the Realme XT.
Dhibaatada weyn ee Realme, waa software
Software-ka qalabeeya marin-haweyaashani ma aha wax kale oo aan ka ahayn lakabka ColorOS 6 of Oppo.
A “aad u Aasiya” software leh hawlo badan, laakiin leh isbeddello badan oo ku jira interface ah, aad u jecel yahay macruufka.
Realme waxay ka shaqaysaa waxa loo yaqaan “Realme OS”.
Lakab shaqsiyeed oo shaqsiyan Aynu ilaawayno ColorOS.
Hadda wixii ku saabsan lakabkan cusub ee is-habeynta Waxba lama yaqaan.
Laakiin waan khiyaanayn karnaa lamid tahay MIUI ama ZUI.
Lakabyada qaar ee hagaajinta oo leh dhinac saaxiibtinimo badan ka badan ColorOS ama FuntouchOS (live).
Dhex-dhexaadku wuxuu helay aad, aad u xiiso badan
Sababta oo ah hoos udhaca iibka ee xarumaha dhamaadka-dhamaadka soosaarayaasha ayaa go’aansaday sharad ku saabsan heerka dhexe in ka badan sidii hore.
Taasi waa sababta aan u leenahay ikhtiyaarrada aan dhamaadka lahayn ee xaddidan oo u dhow dhownaan.
Waan arki doonnaa haddii soo saarahaan runtii lagu sameeyo dalool suuqan, waayo taasi weli waa ay maqan tahay, Waa nooc-hoosaad aad u dhowaan.
Marka laga hadlayo cinwaanka, Redmi iyo Xiaomi waa inay taxaddar muujiyaan sababta oo ah Realme waxay bixisaa terminalyo aad u mudan oo qiimo go’an ah, sida iyaga oo kale.
Oo haa, ilaa intaad tijaabiso Redmi Note 8 Pro waan dhihi karnaa taas Realme 5 waxay u egtahay mid aad u xiiso badan.
Websaydh rasmi ah